४०.२६ अंकले घट्यो नेप्से, ५ अर्ब ३५ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
भदौ ३०, काठमाडौं । साताको चौथो कारोबार दिन बुधवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ४० दशमलव २६ अंक अर्थात् १ दशमलव ३७ प्रतिशत घटेको छ ।
यो दिन परिसूचक २ हजार ८८९ दशमलव शून्य ३ विन्दुमा झरेको हो । कारोबारमा आएका २२२ ओटा कम्पनीको १ करोड ५ लाख ५७ हजार ८६६ कित्ता शेयरको ७५ हजार ८९५ पटकमा रू. ५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख ९७ हजार २५० बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहको परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से घटेको हो । यो दिन सबैभन्दा बढी वित्त समूहको परिसूचक २ दशमलव ९८ प्रतिशतले घटेको हो ।
त्यसैगरी बैंकिङ् समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत,व्यापार समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८ प्रतिशत,होटल एण्ड टुरिजमको परिसूचक २ दशमलव २४ प्रतिशत ,विकास बैंक समूहको २ दशमलव ११ प्रतिशत,हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक २ दशमलव ११ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यस्तै निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक २ दशमलव ०५ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत,अन्य समूहको १ दशमलव १३ प्रशित,माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत,जीवन बीमा समूहको १ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत,म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव २८ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक १ दशमलव ८४ प्रतिशतले घटेको छ ।
कारोबारमा आएका २२२ ओटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयरमूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ८ दशमलव २३ प्रतिशत बढेको छ । यो दिन उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ८१८ दशमलव १० पुगेको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ६ दशमलव ६७ प्रतिशत बढेर रू. १ हजार ४० पुगेको छ ।
त्यस्तै सबैभन्दा बढी शेयरमूल्य घट्नेमा एनआइबिएल समृद्धि फण्ड १ रहेको छ । उक्त योजनाको इकाई मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ६ दशमलव ८८ प्रतिशत घटेको छ । योजनाको इकाई मूल्य प्रतिइकाई रू. १२ दशमलव शून्य ५ कायम भएको हो ।
बुधवार सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. २२ करोड १४ लाख ७० हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६७५दशमलव ३० कायम भएको हो ।